Appilkeeshiniiwwan ismaartfoonii beeksistuu saaxilamummaa WA Notify | Washington State Department of Health
Appilkeeshiniiwwan ismaartfoonii beeksistuu saaxilamummaa WA Notify
WA Notify (Akeekkachiisni WA) Washington Exposure Notifications (Akeekkachiisa Saaxilamummaa) (jedhamuun kan beekamu) meeshaa bilisaa ta’ee fayyadamtoota ismaartifoonii, dhibee COVID-19’f yoo saaxilaman odeeffannoo dhuunfaa isaanii osoo hin qoodin isaan akeekkachiisuuf gargaara. Malli kun dhuunfadhaan kan itti fayyadamtan ta’ee eenyummaa keessan beeku yookin eessa akka deemtan hin hordofu.
Akkamittan WA Notify bilbila koo irratti fe’a?
iPhone irratti, Exposure Notifications Seetingii keessaa akka hojjatu godhaa:
Gara Settings (Seetingii) dhaqaa
Gara Exposure Notifications tti gadi bu’aa
“Bani (Turn On) Exposure Notifications cuqaasaa”
United States (Yunaayitid Isteetis) filadhaa
Bilbila Andirooyidii irratti:
Gara Google Play Store dhaqaa
Appilikeeshinii WA Notify buufadhaa
Andirooyidii yookin ayifoonii (iPhone) irratti, koodii QR iskaan godhaa:
Yeroo WA Notify akka hojjatu gootan, bilbilli keessan bilbila namoota isinitti dhiyoo jiranii fi WA Notify akka hojjatu godhanii waliin koodii icciitii wal jijjiira. Odeeffannoo waa’ee dhuunfaa kee osoo hin mul’isin koodiwwan icciitii kanneen qooduf, applilikeeshinichi teekinoolojii icciitii dhuunfaa eegu kan Biluutuuzii Anniisaa Xiqqaa (Low Energy Bluetooth) fayyadama. Fayyadamaan WA Notify kan biroo kan isin torban lamaan darban itti dhiyeenyan waliin turtan COVID-19’n yoo qabame fi adeemsicha hordofuun namoota biroof akeekkachiisa yoo kenne, akeekkachiisni icciitii isin saaxilamuu akka hin oolle agarsiisu isin qaqqaba. Kuni kunuunsa barbaaddu hatattamaan akka argattuu fi namoota naannoo keessan jiranitti COVID-19 akka hin tatamsaasneef isin gargaara.
Algoorizimichi, taatewwan COVID-19 dabarsuu danda’an bakka kanaan dura fageenya sirrii irra turan yookin fageenya gabaabaa akeekkachiisu fudhachuun isin hin barbaachifne ta’uu addaan baasuf herreega hojjata. Sirriiti saaxilamtaniirtu yoo ta’e, WA Notify isin akeekkachiisa. Kanaaf, akeekkachiisni isin hin qaqqabne jechuun oduu gaaridha.
WA Notify afaanota 30 oliin argachuun ni danda’ama, kanaaf namoonni Washington keessa jiraatan baay’en isaanii mala (tool) kana argachuu ni danda’u.
Bu'aawwan qorannoo COVID-19 manaa poozitivii ta'eef koodii mirkaneessituu akkamitti akka gaafatamu
Fayyadamtoonni WA Notify (Beeksisa Saaxilamuu Waashingtan) meeshalee qorannoo ofii/manaa bitanii fi bu'aa COVID-19 poozitivii fudhatan amma WA Notify keessatti koodii mirkanessituu gaafachuu ni danda'u.
Koodii Mirkaneessituu meeshaadhan gaafachuudhaf:
WA Notify banuudhan “Share your test result to help stop the spread of COVID-19” (“Tatamsa'ina COVID-19 dhaabuu gargaaruf bu'aa qorannoo keessanii qoodaa”) kan jedhu filadhaa.
“Continue (Itti fufi)” kan jedhu filadhaa, achumaan “I need a code.” (“Koodiin na barbaachisa”) kan jedhu filadha.
Lakkoofsa bilbilaa meeshaa keessan kan WA Notify fayyadamuu fi guyyaa qorannoo COVID-19 poozitivii keessanii galchaa.
“Send Code” (Koodii Ergi) kan jedhu filadhaa.
Gara Qindaa'inoota (Settings) deemuudhan Beeksisoota Saaxilamuu (Exposure Notifications) banaa.
“Share a COVID-19 Diagnosis.” (“Qorannoo COVID-19 Qoodi”) kan jedhu filadhaa.
“Continue (Itti fufi)” kan jedhu filadhaa, achumaan “Didn’t get a code (Koodii hin arganne)? kan jedhu filadhaa WA State Dept. of Health Website (Qajeelcha Isteeta WA Toora Interneetii Fayyaa) ilaalaa.”
“Continue” (Itti fufi) kan jedhu filadhaa.
Beeksisni ol baatuu fi ergaan barruu geessituu mirkaneessituu wajjiin isin qaqqaba. Fayyadamtoota birootif saaxilama gahuu malu eeyummaa osoo hin beeksisisiin akeekkachiisuf sadarkaawwan WA Notify keessa jiran hordofuuf beeksisa tuquu ykn geessituu ergaa barruu keessa jiru irratti cuqaasuu qofatu isin irraa eegama. WA Notify keessatti koodii mirkaneessituu keessan erga gaafattanii booda, bu'aa poozitivii keessanii Department of Health (DOH, Qajeelcha Fayyaa)tif gabaasuf gara sarara bilbilaa COVID-19 isteetaa 1-800-525-0127 bilbilaa,achumaan # irratti cuqaasaa.
Yoo isin WA Notify keessatti koodii mirkaneessituu gaafachuu hin dandeessan ta'e, sarara bilbilaa COVID-19 Isteetaa 1-800-525-0127 irratti bilbiluu, achumaan # irratti cuqaasuu fi hojjettoonni sarara bilbilaa isin akka fayyadamaa WA Notify taatan akka beekan godhuu qabdu. Fayyadamtoonni WA Notify biroo tarii saaxilamaniiru yoo ta’e akka akeekkachiistaniif hojjattoonni sarara bilbilaa irra hojjatan geessituu mirkaneessaa isiniif kennuu ni danda'u.
Bu’aawwan qorannoo manatti taasifamu poozitiivii kan ta’e akkamitti akka gabaastan
Namoonni meeshalee qorannoo ofii/manaa bitatanii fi bu’aa qorannoo poozitiivii fudhatan akkuma bu’aawwan qorannoo isaan qaqqabeen sarara bilbilaa COVID-19 naannichaa kan ta’e 1-800-525-0127 irratti bilbiluu, achumaan # irratti cuqaasuu qabdu (Ispaanishiif 7 cuqaasaa). Sa'aatiiwwan bilbilaatiif fuula Contact Us (Nu Qunnamaa) jedhu ilaalaa.Deeggarsi tajaajila afaanii jira.
Maaloo hubadhaa: WA Notify meeshaa beeksisa saaxilamuuti. Fayyadamtoonni bu’aawwan qorannoo isaanii akka itti galchaniif hin tolfamne.
Icciitiin koo akkamitti eegama?
WA Notify teekinoolojii Appilikeeshinii Akeekkachiisa Saaxilamummaa Gugilii kan icciitii keessan eeguf tolfame irratt hundaa’a. Osoo bakkee argamaa (location) yookin odeeffannoo dhuunfaa hin sassaabin yookin hin mul’isin dudduubatti dhoksaadhan (in the background) hojjata, akkasumas sirriitti hojjachuudhaf eenyummaa keessan yookin eessa akka jirtan baruu hin barbaachisu. Anniisaa Biluutuuzii xiqqoo waan fayyadamuuf, baatiriin keessan isin jalaa hin dhumu.
Hirmaannan guutummaatti fedhiidhani. Fayyadamtoonni fedhiidhaan itti dabalamuu yookis keessaa bahuu ni danda’u Icciitiin fayyadamaa akkamitti akka eegamu odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan seera/dambii icciitii WA Exposure Notifications ilaalaa.
Akeekkachiifni kun maal fakkaatu?
Akeekkahiisa (notification) gosa lamatu isin qaqqaba. Namoonni qoratamanii poozitiivii ta’an liinkii mirkaneessatu karaa ergaa gabaabaa qaqqaba fi/yookin hubachiisatu qaqqaba. Fayyadamtoonni WA Notify kanneen tarii saaxilamanii turan akeekkachiisa saaxilamummaa (exposure notification) isaan qaqqaba. Waa’ee akeekachiisawwan kanaa caalmatti baraa akkasumas maal akka fakkaatan ilaalaa.
Namoonni caalmatti akeekkachiisa saaxilamummaa yoo fayyadaman, fayidaan isaa guddaa akka ta’e qorannoon University of Washington (Ingiliffa qofaan) tin dhiyeenya taasifame ni agasriisa. Bu’aalen qorannoo akka agarsiisanitti, ji’oota afran jalqabaa hojiirra oletti WA Notify tilmaaman lubbuu namoota 40-115 akka baraare fi keezii COVID-19 tin qabamuu 5,500 hambisuu danda’eera. Modeelin odeeffannoo (data models) akka agarsiisutti, namoonni muraasni WA Notify fayyadaman iyyuu dhibee COVID-19 fi du’a ittisuu ni danda’u, kuni kan agarsiisu WA Notify tatamsa’ina COVID-19 ittisuuf mala (tool) baay’ee gaarii ta’uu isaati.
Waa’ee WA Notify (Akeekkachiisa WA) jecha tamsaasuu barbaadduu?
Toolkiitii WA Notify keenya ergaa miidiyaa hawaasaatif, poostariiwaaniif, eddattoo yookin saampilii beeksisa reediyoo fi TV fi kaneen biroo ilaalaa.
Gaaffilee kan biroo yeroo heddu gaafataman
Washington State Department of Health (DOH, Biiroo Fayyaa Washington State) irraa ergaan barreeffamaa fi/yookin hubachiisni na qaqqabeera. Maaliif?
DOH namoota dhiyeenyatti COVID-19’n qabaman hundumaaf ergaa barreeffamaa fi/yookin akeekkachiisa (pop-up notification) bilbila isaanii irratti ergaaf, kunis fayyadamtoonni WA Notify fayyadamtoonni kan biroo akka hin saaxilamneef akeekkachiisa hatattamaan dhoksaan akka dabarsaniifi. Waa’ee akeekachiisawwan kanaa caalmatti baraa akkasumas maal akka fakkaatan ilaalaa.
Lammanuu isin qaqqabe yo ta’e, akeekkachiisa qofaa tuquu yookin ergaa barreeffamaa liinkii qabu cuqaasutu isin irraa eegama, sana booda adeemsa WA Notify keessa jiru hordofaa, fayyadamtoonni kan biroo akka hin saaxilamne akekkachiisuf.
Talallii fudheera yoo ta’e WA Notify na barbaachisaa?
Eeyyee. Talallii COVID-19 guutuu fudhattaniirtu yoo ta’e illee, of-eeggannoowwan weeraricha ofirraa ittisuuf taasifamu hordofuu qabdu. Talaallin mala bu’a qabeessa dhibicha ofirraa ittisuuf isin gargaarudha, haa ta’u garuu dhibichaan ni qabamtu yookin nama talaallii hin fudhatinitti ni dabarsitu sodaan xiqqaan jira.
Waa’ee WA Notify koo haaraa fayyaa hawaasatiif gumaachuu ergaan/akeekkachiisni na qaqqabeera. Maaliif?
Washington State Department of Health (DOH) WA Notify hangam sirriitti akka hojjatu baruu barbaada. Kunis waanta sirrachuu/jijjiiramuu qabu akka sirreessinuu dandeenyuuf nu gargaara. Daataa WA Notify keessan qooduf yoo itti walii galtan, iccciitiin dhuunfaa keessan eegamaadha. Odeeffannoon dhuunfaa kamiyyuu waan hin sassaabamneef yookin nama biroof waan hin qoodamneef karaan ittiin adda isin baasan hin jiru. DOH qofaatu sadarkaa naannoo qofatti daataa/odeeffannoo kana arguu danda’a.
Fayyadmatoonni WA Notify odeeffannoo isaanii qoodudhaaf yoo itti walii galan, maaltu sassaabama?
Odeeffannoo keessan qoodudhaaf yoo itti walii galtan, icciitiin huunfaa keessan ni eegama. Odeeffannoon dhuunfaa kamiyyuu waan hin sassaabamneef yookin nama biroof waan hin qoodamneef karaan ittiin adda isin baasan hin jiru. Washington State Department of Health qofaatu odeeffannoo sadarkaa naannoo kana arguu danda’a. Odeeffannoon kunus kan hammatu:
Lakoofsa namoota WA Notify irraa odeeffannoo isaanii qoodudhaaf itti walii galanii. Kuni namoonni/saampiliin keenya hangam akka sirriitti bakka bu’u/sirrii ta’e akka barruuf nu gargaara.
Lakkoofsa Exposure Notifications fayyadamtoota WA Notify bira qaqqabanii. Kuni kan nu gargaaru tatamsa’ina COVID-19 keessatti jijjiirama jiru ilaaludhaafi.
Baay’ina namoota akeekkachiistuu saaxilamummaa cuqaasan. Kuni namoonni waanta fayyaan hawaasaa jedhu fudhachuuf hangam fedhii akka qaban qorachuuf nu gargaara.
Baay’ina namoota nama COVID-19’n qabametti dhiyoo turanii, garuu ammoo sababa baay’ee itti hin dhiyaannef yookin yeroo dheeraa bira hin turreef saaxilamoo ta’uu isaanii kan agarsiisu akeekkachiisne kanneen hin qaqqabne. WA Notify keessatti algorimiin saaxilamummaa murteessu sirrachuu qabaachuu dhiisuu isaa akka addaan baafannuuf kuni nu gargaara.
IPhone koo irratti WA Notify yommuun akka hojjatu taasisu, dirqama togilii “Availability Alert (Mallattoon Aragamuu Agarsiisu)” banuu yookin cufuun qabaa?
Cufaan gaaridha. Yeroo murtaa’eef naannoo Washington ala deemta yoo ta’e banaa yoo dhiiste kan gorfamu ta’us. Mallattoon Argamuu Agarsiisu (Availability Alert) yeroo banaa ta’u fi bakka teekknoljiin akeekkachiistuu saaxilamummaa WA Notify ala ta’e jiru yommuu deemtan, akeekkachiisni/ergaan isin qaqqaba. Fayyadamtoonni iPhone naannolee heddu dabaluu/galchuu ni danda’u; garuu, yeroo tokkotti naannoo tokko qofa akka hojjatu gochuu qaabu. Kan biraa haaraa akka hojjatu gochuuf naannoo tokko/kan duraanii balleessuun isin irraa hin eegamu. Fayyadamtoonni Andirooyidii appilikeeshinii akeekkachiisa saaxilamummaa kannnee akka WA Notify naannolee garaa garaa irraa buufachuu danda’u, haa ta’u garuu appilikeeshinii teekinoolojii WA Notify wajjin wal simu qofaatu yeroo tokkotti hojjata.
WA Notify fayyadamuudhaaf filachuutu/seenuutu narraa eegamaa?
Eeyyee. WA Notify bilisaa fi fedhiidhani. Yeroo barbaaddanitti keessaa bahuu ni dandeessu. Salphaadhumatti saganticha (feature) cufaa yookin appilikeeshinicha balleessaa. Koodiwwan icciitii bilbilichi fayyadamtoota dhiyeenya jiran irraa guuree kuuse hundinuu ni balleeffamu, deebi’uus hin danda’an.
WA Notify appilikeeshinii tuttuqaa ittiin hordofaniidhaa?
Lakki. WA Notify odeeffannoo namoota naannoo isaanii turtanii hin hordofu yookin hin argatu, kanaaf hojii “hordoffii tuttuqqii” hin gaggeessu. Tuttuqqii adda baasun, namni COVID-19’n qabame eenyu akka saaxile yookin eenyu wajjin tuttuqqii akka taasise adda baasa. Appilikeeshinichi odeeffannoo dhuunfaa hin funaanu yookin nama biroof hin qoodu, kanaaf eenyu isin wajjin tuttuqqii akka taasise baruun hin danda’amu.
Saaxilamummaan kan uumamu nama WA Notify fayyadamu kan boodarra COVID-19’n qabame waliin yeeroo dheeraa yoo dabarsitee turteedha. Waa’ee walirraa fageenya qaama fi tatamsa’ina COVID-19 ilaalchisee kuni kan hordofu qajeelfama waktawaa Centers for Disease Control and Preventio (CDC, Wiirtuu To’annoo fi Ittisa Dhibee (Ingiliffa qofaan) irraayi. Saaxilamummaa murteessuf, WA Notify algorizimii hiika tuttuqqii walitti dhiyeenyan taasifamu kan CDC wajjin wal simu fayyadama – ijjata miilaa 6 (meetira 2) gidduutti turtii daqiiqaa 15 yookin isaa ol yeroo dhibicha daddabarsuun danda’amu – aangawoota fayyaa hawaasatiin sirrachuus ni danda’a.
Tarii saaxilamee akkan ture WA Notify yoo natti hime/beeksise maaltu ta’a?
Saaxilamuu akka hin oolle WA Notify yoo isinitti hime, akeekkachiisni bilibila keessan irra jiru kallattiidhaan gara marsariitiitti isin geessuun itti aansee maal gochuu akka qabdan odeeffannoo akka argattan godha. Kunis kan of keessatti hammatu akkamittii fi eessatti akka qoratamuu dandeessan, odeeffannoo waa’ee ofii keessan eegu fi nageenya namoota isinitti dhiyoo jiranii eeguu, akkasumas qabiyyeewwan/maloota gaaffilee keessan deebisuuf gargaaran fa’a. Qajeelfamoota marsariitii irra jiran seeran dubbisuu fi hordofuun barbaachisaadha.
COVID-19 dhaan yoon qabame namoonni ni beekuu?
Lakki. WA Notify odeeffannoo waa’ee kee ibsu nama kamiifuu hin qoodu. Nama tokko ergaan akeekkachiisaa saaxilamuu akka hin ooolle yoo qaqqabe, namni sun kan beekuu danda’u guyyoota 14’n darbanitti namni inni/isheen itti dhiyoo ture COVID-19 dhaan akka qabame/te ta’uu isaati. Namni qabame sun eenyu akka ta’e yookin saaxilamummaan kun eessatti akka mudate namoonni biroo beekuu hin danda’an.
WA Notify dhaaf kaffaluutu narraa eegamaa?
Lakki. WA Notify bilisa.
WA Notify akkamitti Washington state gargaara?
Namoonni caalmatti akeekkachiisa saaxilamummaa yoo fayyadaman, fayidaan isaa guddaa akka ta’e qorannoon University of Washington (Ingiliffa qofaan) tin dhiyeenya taasifame ni agasriisa. Bu’aalen qorannoo akka agarsiisanitti, ji’oota afran jalqabaa hojiirra oletti WA Notify tilmaaman lubbuu namoota 40 to 115 akka baraare fi keezii COVID-19 tin qabamuu 5,500 hambisuu danda’eera. Modeelin odeeffannoo (data models) akka agarsiisutti, namoonni muraasni WA Notify fayyadaman iyyuu dhibee COVID-19 fi du’a ittisuu ni danda’u, kuni kan agarsiisu WA Notify tatamsa’ina COVID-19 ittisuuf mala (tool) baay’ee gaarii ta’uu isaati.
Isteetii/naannoodhaan ala yoon bahe WA Notify ni hojjataa?
Eeyyee. Yeroo isteetiidhaan ala baatu appilikeeshinii teekinoolojii Apple/Google fayyadamu qabattee jirta yoo ta’e, naannoo sana keessattis bilbilli koodiwwan icciitii fayyadamtoota kan biroo waliin wal jijjiiruu ittuma fufa. Seetingii appilikeeshinii keessan jijjiiruun hin barbaachisu. Yeroo dheeradhaaf Washingtoniin ala turtu yoo ta’e, deeggarsa naannoo fi of-eeggannoo/akeekkachiisa argachuudhaaf isteetii/naannoo haaraa keessa jirtan sanatti filannoowwan biroo yaaluu qabdu.
Hordoffii tuttuuqqii fi WA Notify lamaan isaanituu maalif nu barbaachisu?
Hordoffiin tuttuqqii waggoota dheeradhaaf hojii fayyaa hawaasaa bu’a qabeessa ture. WA Notify hojiidhuma kana icciitii osoo hin baasin gargaara. Fakkeenyi isaa kunooti: COVID-19 dhaan yoo qabamtan, ogeeyyiin fayyaa hawaasaa isiniif bilbiluudhaan yeroo dhiyootti eenyu wajjin tuttuqqii akka qabdan isin gaafachuu danda’u. Nama haaraa baasii keessatti bira teessan maqaa dhahuu hin dandeessan. Lamaan keessanuu WA Notify ni foyyadamtu yoo ta’e, namni haaran (the stranger) geejjiba irra osoo jiruu saaxilamuu akka hin oolle akeekkachiisni ni qaqqaba, COVID-19 hiriyoota fi maatii isaanitti akka hin tatamsaasnef tarkaanfii fudhadhaa. Akkuma harka dhiqachuu fi maaskii godhachuun tatamsa’ina COVID-19 ittisuuf gargaaru, kuni gaafa itti dabalamu ammoo baay’ee bu’a qabeessa ta’u.
WA Notify fayyadamtoota kan biroo akeekkachiisuuf/beeksisuuf hangam itti fudhata?
Fayyadamtoonni nama biraa appilikeeshinicha fayyadamuun COVID-19 dhaaf saaxilaman, fayyadamaan COVID- dhan qabame fayyadamtoota WA Notify kan biroo icciitidhaan akeekkachiisuf erga sadarkaalee WA Notify keessatti argamu hordofeen booda, sa’aatii 24 gidduutti akekkachiisi isaan qaqqaba.
WA Notify irraa akeekkachiisa heddu fudhachuun ni danda’amaa?
COVID dhaan yoon qabame akkamittan WA Notify tti himuu danda’a?
Yoo isin bu'aan qorannoo keessanii poozitivii taatanii fi namni tokko Department of Health (DOH, Qajeelcha Fayyaa) Isteeta Waashingtanirraa ykn abbaa taayitaa fayyaa hawaasaa naannoo keessanii isin qunnaman WA Notify fayyadamaa jiraachuu keessan ni gaafatu. Ni fayyadamtu taanan, geessituu mirkaneessaa fi/ykn beeksisa isiniif ergu akkasumas WA Notify seenuf sadarkaawwan akka hordoftan isin gargaaru. Geessituun ykn beeksisni odeeffannoo dhuunfaa keessan wajjin wal hin qabatu. Sadarkaawwan yeroo hordoftan, DOH waa'ee aaxilamummaa ilaalchisee appilikeeshinichaan eenyu beeksisni akka qaqqabuu karaa ittiin beeku hooma hin qabu. Beeksisini saaxilamummaa odeeffannoo waa'ee keessanii homaatuu hin qabatu. Namoonni bu’aa qorannoo isaanii icciitidhaan WA Notify keessatti hammuma heddumminaan mirkaneessaa deeman, tatamsa’ina COVID-19 caalmatti ittisuu dandeenya.
Yoo bu'aan qorannoo keessanii poozitivii ta'ee fi ammas eenyummaa osoo hin ibsinbu'aa keessan WA Notify keessatti mirkaneessuun isin irra jiraate, saaxilama ta'uu malu fayyadamtoota WA Notifybirootti eenyummaa osoo hin ibsin koodii mirkaneessituu gaafachuuf sadarkaawwan argachuuf kutaa “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Bu'aawwan qorannoo COVID-19 manaa poozitivii ta'eef koodii mirkaneessituu akkamitti akka gaafatamu)” fuula kana keessatti ilaalaa.
Koodii Mirkaneessituu keessan WA Notify keessatti erga gaafattanii booda, gara sarara bilbilaa COVID-19 isteetaa,, 1-800-525-0127, bilbilaa, achumaan bu'aa poozitivii keessanii DOHtif gabaasuf # irratti cuqaasaa.
Ergan WA Notify bibila koo irratti fe’een booda waanti kan biraa ani gochuu qabu jiraa?
Tarkaanfiin biraa kan barbaachiso kan armaan gadii qofaafi:
Yoo COVID-19 dhaan qabamtan, yookin
Dhibichaaf saaxilamuu akka hin oolle beeksisni ibsu yoo isin qaqqabe.
Yoo qorannoodhaan isin irratti argameefi namni tokko Department of Health (DOH, Qajeelcha Fayyaa) Isteeta Waashingtanirraa ykn abbaa taayitaa fayyaa hawaasaa naannoo keessanii isin qunnaman WA Notify fayyadamaa jiraachuu keessan ni gaafatu. Ni fayyadamtu taanan, geessituu mirkaneessaa fi/ykn beeksisa isiniif ergu akkasumas WA Notify seenuf sadarkaawwan akka hordoftan isin gargaaru. Geessituun ykn beeksisni odeeffannoo dhuunfaa keessan wajjin wal hin qabatu. Waa’ee saaxilamummaa ilaalchisee DOH eenyu akka appilikeeshinichaan beeksisni akka qaaqqabe karaa ittiin beekuu hin qabu. Beeksisini saaxilamummaa odeeffannoo waa'ee keessanii homaatuu hin qabatu. Namoonni bu’aa qorannoo isaanii icciitidhaan WA Notify keessatti hammuma heddumminaan mirkaneessaa deeman, tatamsa’ina COVID-19 caalmatti ittisuu dandeenya.
Yoo bu'aan qorannoo keessanii poozitivii ta'ee fi koodii mirkaneessituu isin barbaachise, saaxilama ta'uu malu fayyadamtoota WA Notify birootti eenyummaa osoo hin ibsin beeksisuuf koodii mirkaneessituu gaafachuuf sadarkaawwan argachuuf kutaa “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Bu'aawwan qorannoo COVID-19 manaa poozitivii ta'eef koodii mirkaneessituu akkamitti akka gaafatamu)” fuula kanaa ilaalaa.
Koodii mirkaneessituu keessan WA Notify, keessatti erga gaafattanii booda, bu'aa poozitivii keessanii DOHtif gabaasuf gara sarara bilbilaa COVID-19 isteetaa, 1-800-525-0127, bilbilaa, achumaan # irratti cuqaasaa.
Saaxilamuu akka hin oolle WA Notify yoo isinitti hime, akeekkachiisni bilibila keessan irra jiru kallattiidhaan gara marsariitiitti isin geessuun itti aansee maal gochuu akka qabdan odeeffannoo akka argattan godha. Kunis kan of keessatti hammatu akkamittii fi eessatti akka qoratamuu dandeessan, odeeffannoo waa’ee ofii keessan eegu fi nageenya namoota isinitti dhiyoo jiranii eeguu, akkasumas qabiyyeewwan/maloota gaaffilee keessan deebisuuf gargaaran fa’a. Qajeelfamoota marsariitii irra jiran seeran dubbisuu fi hordofuun barbaachisaadha. Akeekkachiisichi odeeffannoo waa’ee eenyu kanaaf akka isin saaxilee fi essatti kan jedhu of keessatti hin qabatu. Guutummaatti icciitin isaa kan eegameedha.
WA Notify fayyadamuun baatirii kiyya na jalaa akka hir’atu ni taasisaa yookin daataa baay’ee ni fayyadamaa?
Lakki. Bluetooth Low Energy technology fayyadamuudhaan akka baatirii fi daataa keessan irratti dhiibbaa cimaa fiduu akka hin dandeenyetti kan hojjatameedha.
WA Notify’n akka hojjatuuf biluutuuzii banaa godhee kaa’un qabaa?
Eeyyee. WA Notify’n Bluetooth Low Energy waan fayyadamuuf fayyadamtoonni biroo dhiyeenya jiraachuu isaanii siistamichi akka arguuf biluutuuziin yeroo hunda banaa ta’uu qaba.
WA Notify akka hojjatuuf bilbila kiyya irratti banaa godhee kaa’un qabaa?
Lakki. WA Notify osuma bilbila fayyadamaa jirtanii ofumaan hojjata.
WA Notify Ismaartifooniin kan turan irratti ni hojjataa?
Gosti isaan qaban kanneen armaan gadii yoo ta’e, namoonni iPhone fayyadaman WA Notify fayyadamuu danda’u:
iOS gosa 13.7 yookin isa boodaa (iPhone 6s, 6s Plus, SE dhaaf yookin haaradhaaf)
iOS gosa 12.5 (iPhone 6, 6 plus, 5s dhaaf)
Ismaartifooniin Andiroyidii keessan Bluetooth Low Energy fi Android vershinii/gosa 6 (API 23) yookin kan isaa oliiti yoo ta’e, fayyadamtoonni Andirooyidii WA Notify fayyadamuu ni danda’u.
WA Notify fayyadamuudhaaf waggaa 18 guutun qabaa?
Lakki. WA Notify umurii keessan hin ilaalu yookin hin hordofu.
Bilbila kiyya naama biraatti yoon kenne teekinoolojiin kun ni hojataa?
Yeroo saaxilamummaan jirutti eenyu akka bilbilicha fayyadamaa akka ture WA Notify hin ibsu. Bilbila nama biraatti yoo kennitani fi WA Notify carraan COVID-19 tiif saaxilamuu akka jiru WA Notify yoo agarsiise, namni bilbilicha fayyadamu kamiyyuu qajeelfmoota fayyaa hawaasaa hordofuun dirqama.
Meeshaalee kanneen akka iPads yookin sa’aatii ismaart (smart watches) irratti WA Notify ni hojjataa?
Lakki. Bu’uuri/caasaan Akeekkachiisa Saaxilamummaa kan hojjatame addumatti bilbiloota ismaart ta’aniif kan qophaa’e yoo ta’u iPads yookin taableetii irratti hin hojjatu.
Namoota bilbiloota ismaart hin qabne teekinoolojii kana akka argataniif Washington state maal hojjataa jira?
Tatamsa’ina COVID-19 ittisuudhaaf maloonni gargaaran WA Notify qofa miti. Yoodhuma bilbiloota ismart hin qabaanne illee, hordoffii tuttuuqqii fi tattaffiwwan biroo taasisuun jiraattota Washington hunda kan fayyaduudha. Tatamsa’ina -19 ittisuuf talaallii fudhachuun mala baay’ee filatamaadha; maaskii godhachuun, walirraa fageenya qaamaa eegun fi walitti qabama namootaa hir’isuunis maloota biraa namni kamiyyuu gochuun tatamsa’ina COVID-19 ittisuu danda’uudha.
Lifeline program (sagantaan lubbuu baraaruu) mootummaa federaalaa namoota ulaagaa guutaniif baasii bilbilaa ji’aa ni dhiyeessaf. Hirmaattonni tajaajila sarara maleessaa dhiyeessan ismaartfooniwwan bilisaa dhiyeessuu ni danda’u. Waa’ee sagantichaa, eenyu ulaagaa akka guutu, akkamitti akka galmaa’anii fi hirmaattota dhiyeessitoota sarara maleessaa (wireless) caalmatti baradhaa (Ingiliffa qofaan).
Yaadadhaa, tatamsa’ina COVID-19 ittisuuf talaallii fudhachuun mala baay’ee filatamaadha.
Maalif WA Notify baatirii baay’ee waan fudhatu fakkaata?
Dhugaa hin fakkaatu. Fayyadamni baatirii bilbila keessan irra jiru kan agarsiisu appilikeeshiniiwwan akka WA Notify dabalatee guyyaa guyyaatti baatirii dhibbeentaa meeqa akka fayyadamtaniidha. Appilikeeshiniiwwan heddu halkan hin hojjatan. WA Notify akkasuma hin hojjatu, garuu ammoo garaa sa’aatiii sa’atiidhaan koodiwwan icciitii nama dhibichaan qabamee appilikeeshinicha fayyadamu waliin wal simsiisun dhibichaaf saaxilamuu akka dandeessan isin NI beeksisa. Fakkeenyaaf, yeroo raftanii jirtanitti appilikeeshiniin tokko illee banamee/hojjataa hin jiru yoo ta'e, baatirii yeroo sana fayidaarra oole dhibbeentaa olaanaa kan fudhatu WA Notify dha. Sana jechuun WA Notify baatirii heddu fayyadama jechuu miti – hanga baatirii xiqqaa ta’e keessaa dhibbeentaa olaanatu fayidaarra oole jechuudha.
Washington afaanota 30 oliin WA Notify gadi lakkisee jira, kanaaf Guugil Pileey Istoor keessatti maalifan afaan Ingiifaa fi Ispaanish qofaan arga?
WA Notify kan hojjatu akkaataa fayyadamaan bilbila irratti afaan filatettiidha. WA Notify gosa tokko qofatu jira, akeekkachiisni kamiyyuu, fakkenyaf, akeekkachiisa saaxlimamuummaa yoo fudhanne fayyadamtoonni afaanota 30 ol naannon Washington hojiirra oolche keessaa kan fedha isaanitiin argachuu ni danda’u.
Ergaan gabaaban fi/yookin akeekkachiisi na dhaqqabeera, garuu namni qoratame/qabame miseen sa maatii yookin nama wajjin jiraannuti. Maal gochuun qaba?
Fayyadamaan WA Notify kan poozitiivii ta’e namoota kan biroo tarii saaxilaman eenyummaa osoo hin ibsin isaan akeekkachiisuf, kanaaf ergaa barreeffamaa ykn beeksisa isin hin ilaallanne dhiisuu qabdu.
Yoo maatin keessan yookin miseensi maatii fayyadamaa WA Notify ta’an, poositiivii yoo ta’an akkasumas bu’aa qorannoo isaaniiWA Notify keessatti mirkaneessuun isaanirra jiraate, sadarkaawwan kutaa “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results” (Bu'aawwan qorannoo COVID-19 manaa poozitivii ta'eef koodii mirkaneessituu akkamitti akka gaafatamu) fuula kanaa keessa jiran hordofuu ni danda'u.
Namoonni meeshalee qorannoo ofii/mataa bitatanii fi bu’aa qorannoo poozitiivii fudhatan akkuma bu’aan qorannoo isaan qaqqabeen sarara bilbilaa COVID-19 naannichaa kan ta’e 1-800-525-0127 tti bilbiluu, achumaan # irratti cuqaasuu qabu (Ispaanishiif 7 irratti cuqaasaa). Sa'aatiiwwan bilbilaatiif fuula Contact Us (Nu Qunnamaa) jedhu ilaalaa. Deeggarsi tajaajila afaanii jira.
Akeekkachiisa tuquuf yookin liinkii mirkaneessaa akka hojjatu gochuuf yeroo hammamin qaba?
Beeksisa yookin ergaan barreeffamaa erga isin qaqqabeen booda sadarkaawwan jiran hordofuun namoota WA Notify keessa jiran/fayyadaman beeksisuuf sa’aatii 24 qabdu. Yoo isin yeroo sana keessatti beeksisicha tuquu ykn geessituu mirkaneessaa tuquu hin dandeeya ta'an, sadarkaawwan kutaa “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results” (Bu'aawwan qorannoo COVID-19 manaa poozitivii ta'eef koodii mirkaneessituu akkamitti akka gaafatamu) fuula kanaa keessa jiran hordofuun WA Notify keessatti kodii mirkaneessituu gaafachuu ni danda'u. Koodii mirkaneessituu keessan WA Notify keessatti erga gaafattanii booda, bu'aa poozitivii keessan gara DOH gabaasuf gara sarara bilbilaa COVID-19 isteetaa, , 1-800-525-0127, bilbilaa,achumaan # irratti cuqaasaa. Akkasumas yeroo namni tokko DOH irraa ykn abbaan taayitaa fayyaa naannoo keessanwaa'ee bu'aawwan qorannoo COVID-19 keessan ilaalchisee isin qunnaman, geessituu gaafachuu ni dandeessu.
Washington maaliif mala kana filate?
Mala (solution) Apple/Google akka qorataniif Washington ogeeyyii mirga sivilii fi nageenyaa akkasumas miseensota hawaasa garaa garaa dabalatee gareewwan naannoo kan doggogora qoratan hundeessee jira. Amanamummaa (fudhatama qabeessummaa) pilaatformichaa/sistamichaa, of-eeggannoo olaanaa odeeffannoodhaf taasifamu fi naannolee birootiin fayidaarra ooluu irratti hundaa’uun akka fudhatamu (adoption) garichi akeekee jira.
WA Notify keessatti akkamittan guyyaan itti saaxilame argachuu danda’a?
Gara Settings (Qindaa'inoota) deemaa
Exposure Notifications (Beeksisoota Saaxilamuu) filadhaa yookin iddoo barbaachaa keessatti Exposure Notifications (Beeksisoota Saaxilamuu)galchaa
Guyyaan itti saaxilamtan “You may have been exposed to COVID-19 (COVID-19 dhaaf tarii kan saaxilamtanii ta'u mala)” kan jedhu jalatti mul’ata
Appilikeeshinii WA Notify banaa
See Details (Gadi fageenyawwan ilaalaa) kan jedhu “Possible exposure reported (Saaxilama ta'uu malu gabaafame)” jala jiru filadhaa
Guyyaan isin itti saaxilamtanii ta'uu malu ““Possible Exposure Date (Guyyaa saaxilamaa ta'u kan malu)” kan jedhu jalatti mul’ata